Kulan Our Team – "Eximio" Accounting Expert
Khibrad aad ku kalsoon karo
Kulan Our TeamOdenir Campos2019-01-05T22:17:16+00:00
xirfadlayaasha Our iyo jaalayaashooda mar walba doonaysa inay ballaariso shabakadda xiriirka la iskaashi cusub oo u dhexeeya shirkadaha doonaya inay daboolaan baahiyaha kala duwan ee suuqa caalamiga ah ee la xiriira shirkadaha raadinaya in ay is yeeshaan Brazil ama shirkadaha Brazil oo doonayaa bilaabaan hawlaha ay dalalka kale. Sida xaqiiqada ah taasoo keentay in la gaaro hadafyada aynu la aasaasay ururka muhiim ah la AMCHAM – American Rugta Ganacsiga ee Brazil ka mid ah ururada ganacsiga iyo warshadaha kale.
Eeg Kooxda Our ...
Our Professionals Accounting Financial waxaa mar kasta basaaseen beddeli waayo, horumarinta mashaariicda u oggolaan Besiness weyn in la fuliyay. Waxaan doonaya fikrado ka badan tirada, Guulaha badan Dreams!! Waxa aanu xisaabinayaa AAD KU SAABSAN!